सबै स्वादका लागि युवा साहित्यको novel उपन्यास। | वर्तमान साहित्य
सबै स्वादका लागि युवा साहित्यको novel उपन्यास।
किशोर साहित्य का उपन्यास।
साथै ESO र स्नातक पाठ्यक्रम कोर्स समाप्त, जो पहिले नै आफ्नो अधिक परिभाषित स्वाद र प्राथमिकताहरू। त्यसैले तिनीहरूका लागि साहित्यमा नयाँ शीर्षकहरू छन्। भन्दा अलि बढी परिपक्वता, oposite भावनाहरु y आफ्नै द्वन्दहरू उमेर को तिनीहरू मार्फत जान। हामी यी कथाहरू के हो हेरौं।
1 ढु stone्गाको माछाको हाँसो - रोजा हूर्टास
2 चुरोचो जादुई बन्धन - टिफनी कलिगारीस
3 एलेक्सको यातना - एलेना गार्सिया
4 सपनाहरु साकार हुन्छन् - राहेल गल्सन
5 तपाईंको आँखाको रात - Sandra Andrés Belenguer
ढु stone्गाको माछाको हाँसो - रोजा Huertas
को पाठकहरूको उद्देश्य 12 देखि 17 वर्ष, को विजेता उपन्यास थियो XIV अनाया पुरस्कार बालबालिका र युवा व्यक्तिको साहित्यको लागि.
जब उसको हजुरबाको मृत्यु हुन्छ, जैमेलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँ एक छ परिवार गोप्य जुन उनको आमाले धेरै बर्ष राखिन्। अस्सीको दशकमा, जैमेकी आमाले यस्तो अनुभव गरे जुन उनले आफ्नो छोरालाई कहिल्यै भनेकी थिइनन्। वास्तवमा जैमेको बुबा को हो? जैमेलाई मात्र थाहा हुन्छ सत्य धन्यवाद एक diario उसको आमाबाट
हामीसँग एउटा कथाको सामना गरिरहेका छौं अस्सीको संगीत पृष्ठभूमि र जसमा वातावरण र के धेरै चिह्नित स्थानहरू भनिन्छ भनिन्छ नाइटलाइफ Madrilenian। युवा पाठकलाई उनीसँग पहिचान गर्न सजिलो छ, किनकि उनी यसका बारेमा कुरा गर्छिन् सम्बन्ध र संघर्ष कि मा हुन्छ किशोरावस्था.
चुरोचो जादुई सम्बन्धहरू - टिफनी क्यालिगारिस
बाट 14 वर्ष यो शीर्षक हो 4º यस अर्जेन्टिनी लेखक र उनको सागा चुरोटहरू.
को दोस्रो वर्ष म्याडिसन बोस्टनको भ्यान टैसल युनिभर्सिटीमा र लसिससँग उनको सानो अपार्टमेन्ट भाडामा छ जुन बाल्यकालदेखि नै उनको सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। सम्म सबै ठीक छ माइकल डर्मोन यसले तपाईंको जीवनलाई पार गर्दछ र प्रकाश बल्ब विस्फोट हुन्छ ... शाब्दिक रूपमा। यो मात्र हो पहिलो नजर मा प्रेम वा अरू केहि? के गोप्य माइकल लुकिरहेको छ? केवल कुरा मात्र उनी अन्तर्वार्ता लिन सक्दछन् कि यो पछिल्लो जस्तो पाठ्यक्रम हुनेछैन र उसको जीवन आमूल परिवर्तन हुनेछ।
स्थापीत हुनु सलेम यस कथाका लागि सबै सामग्रीहरू छन् समात्नुहोस् जोसँग गाथा पहिल्यै थाहा थियो।
एलेक्सको यातना - एलेना गार्सिया
युवा र रोमान्टिक उपन्यास मा फ्रेम, यो शीर्षक एक हो २०१ from बाट वाट (प्लेटफर्ममा सिर्जना गरिएको वाटप्याड) जुन धेरै सफल भएको छ। नयाँहरूका लागि यो अघिल्लो पुस्तक पढ्नु राम्रो हुन्छ, डा। एन्जल.
को लापरवाहिता उनीहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ र त्यो त्यस्तो चीज हो जुन दुर्भाग्यवस छ, एलेक्स राम्रोसँग जान्दछ। एक मानिस खराब निर्णयले सताएको। एक प्रतिज्ञा जुन राख्नको लागि बढ्दो गाह्रो छ र उसले सोचेको छ उसले बिर्सिसकेको छ उसको भित्र फेरि फेरि खस्कने खतरा छ ... के रहस्य रहस्यमय एलेक्स बचत गर्नुहोस् र त्यो को हो महिला उसलाई पागल के हुँदैछ?
सपनाहरु साकार हुन्छन् - राहेल गल्सन
वाटप्याडमा पनि सिर्जना गरियो लक्षित पाठकहरू १ 12 बर्षबाट। यो पहिलो प्रकाशित भएको बेलामा XNUMX XNUMX लाख भन्दा बढी दृश्यहरू प्राप्त भयो। प्रेमीहरू, प्रयोगकर्ताहरू र फ्यानहरू YouTube यसमा छ प्रेम कथा र विजय तपाइँको सबै भन्दा राम्रो पढ्न।
प्रेषक उनी धेरै केटीले पीडित केटी थिइन। तर जब उनको परिवार म्याड्रिड सर्छ र उनी सुरु हुन्छन् कलेज, तपाईंको जीवन परिवर्तन हुन्छ। तपाईं आफ्नो छवि सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, साथीहरूसँग आफूलाई घेर्नुहोस् र हुनुहोस् डिजाइनर, तर यो बाहिर जान्छ कि उनको भर्या। छिमो छ youtuber स्पेनी मा संसारमा सबैभन्दा प्रसिद्ध। उहाँसँग लाखौं अनुयायीहरू छन्, धेरै पुस्तकहरू लेखेका छन्, र टिभीमा विज्ञापनहरू पनि देखा पर्दछन्! Plus तपाईं वा अरू केहि साथी बनाउन चाहन्छ.
तिम्रो आँखाको रात - Sandra Andr Ands Belenuer
पाठकहरूका लागि १ 14 बर्षबाट। एक अर्को शीर्षक पुलिस तर पनि एक रोमान्टिक टोन संग।
हामी भित्र छौ डबलिन जहाँ केहि डरलाग्दो छ हत्या। पीडितहरू सँधै शंकास्पद पेष्टको पुरुषहरू हुन्छन जुन कुनै स्पष्ट कनेक्शनको साथ हुँदैन। वा त धेरै सक्षम संदिग्ध इन्स्पेक्टर गलाघर। यस बीच हामीसँग युवती छ Ciara, जो आफ्नै घरको सपनाको सपनामा बस्छ राम्रो भविष्य। हराएको खुशी फेरि प्राप्त गर्न उनलाई परिवर्तन चाहिन्छ। तर उसलाई थाहा छैन, जति उसले सोचेको भन्दा पनि नजिकै छ र त्यहाँ कोही छ जो पीडित छ जसलाई उसको मदत र प्रेम चाहिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » युवा साहित्य » सबै स्वादका लागि युवा साहित्यको novel उपन्यास।
कसरी हाम्रो साहित्यिक पात्रहरूको लागि उपयुक्त नाम छनौट गर्ने